DF Somalia oo sheegtay nooca ay tahay dhaliisha ay dhegeysanayso! | Hadalsame Media
Home Wararka DF Somalia oo sheegtay nooca ay tahay dhaliisha ay dhegeysanayso!
DF Somalia oo sheegtay nooca ay tahay dhaliisha ay dhegeysanayso!
(Muqdisho) 23 Abriil 2019 – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in diyaar ay u tahay in wada hadal ay la gasho siyaasiinta mucaaradka ah ee diidan hannaanka dowladda hada ay wax u wado.
Isagoo ka hadlayay shir siyaasiin mucaarad ah ay ku yeesheen magaalada Nairobi ayuu sheegay Wasiirka Warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle in la joogo waqtigii siyaasiintu ogaan lahaayeen danaha ummada Soomaaliyeed.
Wasiir daahir Maxamuud Geelle ayaa yiri ‘’ Siyaasiintu waa in ay dhimaan orodka mucaaradnimada ee ay ku jiraan.’’
”Dal iyo dibed kii aad joogtaanba taladiinna waa la qaadanayaa, balse waa in ay noqotaa talo togan oo ka timid mucaarad quman.” ayuu raaciyay.
Intaas waxa uu warkiisa ku daray Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka in dowladdu ay diyaar u tahay in ay tixgaliso siyaasiinta Soomaaliyeed .
Xubno siyaasiin ah oo ku shiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ku eedeeyay Dowladda Federaalka in ay gabtay howshii loo igmaday.
Previous article”Shacabka Soomaaliyeed waxay garab istaag & hiillo u muujinayaan walaalaha Suudaan”
Next articleDF oo qorshe amaan oo ballaaran u diyaarisay bisha Ramadaan (Ciidamo astaamo gaar ah leh oo la diyaariyay)